नयाँ अध्ययन पांडा मीठो दाँत पर्दाफास - समाचार नियम
नयाँ अध्ययन पांडा मीठो दाँत पर्दाफास
मा अन्धा स्वाद परीक्षण, को आठ बाहिर आठ pandas सहमत — चिनी स्वादिष्ट छ.
बाहिर बुधवार एक नयाँ अध्ययन मा, वैज्ञानिकहरूले परीक्षण गर्न पांडा स्वाद रिसेप्टर्स राख्न, को cuddly Critters कि सोच पनि सादा पानी र मिठाई सामान भिन्नता नोटिस हुनेछ.
“आम बोल्ने, भनेर बिरुवाहरु छन् शर्करा क्यालोरी को स्रोतहरू हुन् भनेर पत्ता लगाउन तिनीहरूलाई सक्षम किनभने बिरुवाहरु खान भनेर जनावर मीठो स्वाद रिसेप्टर छ,” गैरी Beauchamp बताए, भनेर बाहिर अनुसन्धान गरे पनि Monell केन्द्र निर्देशक.
तर सबैभन्दा शाकाहारी विपरीत, pandas एक बिरूवा लीन — बांस — जो चीनी कुख्यात कम छ.
त्यसैले शोधकर्ताओं कि छक्क परे — धेरै carnivorous जनावर जस्तै, बिरालोहरु सहित — pandas मिठास पत्ता लगाउन आफ्नो क्षमता गुमाएका थिए.
मांसाहारी भएकोले “बोट खान छैन, शर्करा सम्पर्क छैन, कुनै लामो मिठाई रिसेप्टर कार्यात्मक कायम राख्न तिनीहरूलाई लागि एक दबाव,” Beauchamp भन्नुभयो एएफपी.
सिद्धान्त कि बांस-munching pandas थियो, जो पनि धेरै चिनी उजागर जस्तो छैन, पनि आफ्नो क्षमता स्वाद मीठो कुराहरू नष्ट हुन सक्छ.
Deutsch: महासागर पार्क मा विशाल पांडा, हंगकंग (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
तर यो pandas बाहिर गरिएका, अन्य शाकाहारी जस्तै, अझै पनि राम्रो रूपबाट मीठो दाँत छ.
जब तरल दुई कटोरे दिइएको, एक मीठा र एक छैन, को आठ pandas सार्वभौमिक को चीनी सदृश रक्सी खींचना तल slurped.
शोधकर्ताओं शर्करा को एक किसिम परीक्षण, लगायत फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, sucrose, lactose, maltose, र galactose. सबै अवस्थामा, मिठाई पेय मनपरेको थियो, र विशेष गरी फ्रैक्टोज र sucrose संग व्यक्तिहरूलाई, जो मानिसहरू को sweetest रूपमा बुझ्ने.
वैज्ञानिकहरु पनि pandas देखि मीठो रिसेप्टर कक्षहरू अलग गर्न सेलुलर विश्लेषण प्रयोग र तिनीहरूले शर्करा प्रतिक्रिया देखाउन सके.
तिनीहरूले अन्दाज लगाउनु pandas मीठो रिसेप्टर कक्षहरू किनभने काम गर्ने पकड सक्छ, स्वाद कारक परे, तिनीहरूले अग्न्याशय र पेट जस्तै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ बोट पाचन मद्दत गर्न.
तर यदि pandas मिठाई प्रेम, किन उनि मात्र बांस खान गर्छन्?
कैद, pandas मीठो खानेकुरा आनन्द गर्छन् — वाशिंगटन गरेको नवीनतम पांडा पशुशावक Bao Bao सहित, जो “निहत्था अवधिमा पहिलो खाना रूपमा स्पष्टतः मीठो आलु relishing छ,” भने Danielle रीड, जो पत्रिका मा प्रकाशित कागज लेखे PLOS एक.
तर pandas पनि बांस धेरै आवश्यक, वा बिरामी. एक परिकल्पना गर्ने reedy बोट आवश्यक कुरा प्रदान गर्दछ छ, त्यसैले विकासवादी दबाव बोट मा केवल भरोसा गर्न तिनीहरूलाई नेतृत्व छ.
अर्को सम्भावना परीक्षण भइरहेको, Beauchamp भने, कि pandas लागि हो, बांस वास्तवमा चकलेट जस्तै स्वाद.
आखिर, त्यहाँ निश्चित प्रमाण विभिन्न जनावर अनुभव फरक फरक खानेकुरा छ — कृत्रिम मिठास जस्तै, जो, pandas र धेरै अन्य जनावर लागि, मीठो स्वाद छैन.
यो लेख, नयाँ अध्ययन पांडा मीठो दाँत पर्दाफास, एएफपी देखि सिन्डिकेट छ र अनुमति यहाँ पोस्ट. प्रतिलिपि अधिकार 2014 एएफपी. सबै अधिकार सुरक्षित
23508	0 Bao Bao, चीन, Danielle रीड, खाना, गैरी Beauchamp, विशाल पांडा, चीनी, वाशिंगटन
← ट्विटर ramps अप फोटो साझेदारी सुविधाहरू सवार महाराष्ट्र को यात्रु सम्झँदा 370 →